Wasiir Beyle: Canshuur Kordhin majirto – Radio Daljir
Wasiir Beyle: Canshuur Kordhin majirto
Noofember 7, 2017 12:43 g 1
Wasiirka maaliyadda ee dowladda faderaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa ka hadlay wararka sheegaya inay canshuur ku kordhiyeen ganacsatada wax kala soo dega dekedda Muqdisho.
Isagoo warbaahinta kula hadlayay maanta magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay inay jirin wax canshuur kordhin ah oo ay wasaaradda maaliyadda ay ku samaysay ganacsatda kale duwan ee wax kala soo dega magaalada Muqdisho.
Waxaa uu sheegay dhowaan inay shir la qaadanayaan ganacsatada lagana baahanyahay inay bixiyaan canshuurta ku waajibtay.
Qaar ka mid ah ganactada oo shalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in canshuur lagu kordhiyay ganacsatada oo ay sameysay wasaaradda maaliyadda ee dowlada faderaalka ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Jubbaland oo Kismaayo kusoo dhaweeyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya
Arday ay ku jiraan masuuliyiin xil haya oo heerka 2aad ee jaamacadda ka qaatay PSU (dhegayso)
Maxamud yare 1 year
Wasiir bayle aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay waxaa ka danbeyey beenta kooxo qawleysada ah ee baryahan xaamar ka qaylinayey.